Ehlabathini elungileyo, asisoze sinoxhala malunga nokutshintsha amajoni ewebhu – indawo yethu iya kuhlala isonwabile kwindawo ekhoyo yokubonelela ngumbonelo ngezihlandlo ezinkulu, iindleko ezifikelelekayo, kunye ne-100%.
Ngelishwa, umhlaba awulungelanga kwaye le meko igqibeleleyo ayifane yabekhona. Ukuba umphathi wakho wewebhu okwangoku akakuniki okudingayo, inokuba lixesha lokuba uye kwenye ibengcono (siya kuthetha ngokwazi xa ilixesha lokutshintsha kwi). Ukudlulisela indawo yakho kwi-web host entsha akufuneki nokuba kungakhathali njengokufudukela kwindlu entsha. Ngokwenene kunokuba lula ngokubonakalayo ukuba uthatha amanyathelo afanelekileyo.
1 Inketho # 1: Ngaphandle kwezinto isayithi yakhoHambisa (simahla)
1.3 3- Indawo yangaphambili kuma uphumule
2 Inketho # 2: Dlulisa iwebhusayithi yakho ngesandla
2.1 1- Aleshores umphathi omtsha wewebhu
Xa ususa iwebhusayithi kwi-web eyahlukileyo, kuya kufuneka:
Aleshores, koya wenze i-akhawunti entsha ibambe,
Faka kwaye ulungiselele isicelo sakho (inguqulelo ye-PHP, i-WordPress, njl.njl kumamkeli omtsha,
Jonga indawo entsha kwi-staging / URL yethutyana,
Ukulungisa ingxaki ukuba kukho naziphi na iimpazamo,
Khomba iirekhodi zakho zeDNS entrador de Kwi-Web
Siza kungena phakathi kokubini okukhethwa kukho kweli nqaku.
Inketho # 1: Ngaphandle kwezinto isayithi yakhoHambisa (simahla)
Inyathelo 2-isicelo sokufuduka
Ukukhangela umnxibelelanisi wewebhu obonelela ngenkonzo yokufuduka yasimahla zezi Eyona ndlela ingcono kubaqalayo kunye nabanini bamashishini abaxakekile.
Ukusingathwa kwewebhu lushishini olukhuphisanayo- iinkampani zokubamba zenza konke okusemandleni ukuphumelela abathengi abatsha. Iinkampani ezininzi zokubamba, kubandakanya no pot ezinkulu endizicebisayo, zibonelela ngenkonzo yokufuduka kwewebhusayithi yasimahla kubathengi abatsha. Konke okufuneka ukwenze kukufuna ukufuduka emva kokubhalisa kunye nomnikezeli omtsha kunye neqela labo lenkxaso liya kukhathalela ukuphakamisa ubunzima.
Nantsi a ekufuneka uyenzile ukuba uza kolu khetho:
A2 Hosting -Uyaziwa ngesantya kunye nokuthembeka, ukwabiwa okwabelwana ngakho kuqala kwi- $ 3.92 / mes.
GreenGeeks -I-web-ethandekayo ye-web host, ukuphuculwa okukhulu kwintsebenzo yakutsha nje yokubamba.
InterServer -Iwebhusayithi entsha esekwe kwiJersey, ayibizi amaxabiso ($ 5 / mo) ngexesha lokuvuselela.
Allotjat -Ukusebenza okuhle kakhulu kunye nexabiso elikhulu-ukusingathwa okwabiweyo kuqala kwi- $ 2.95 / mes.
* Ukutyhilwa: Ukuba uyalela ngezo makhonkco ndiza kufumana ikhomishini ngaphandle kwendleko ezongeziweyo kuwe.
Ifayile yesicelo sokufuduka kunye nomamkeli wewebhu wakho omtsha. Ngokwesiqhelo konke okufuneka ukwenze kukubonelela ngedatha yokungena kwihostela yakho yakudala – igama lomamkeli, igama lokungena lokulawula, kunye nokungena kwe-FTP, njl. kwaye umphathi wakho wewebhu omtsha uya kukhathalela ukuphumla.
Umzekelo: Hosting InMotion
Hosting Ukuqlulisa kwesayithi kwesayithi Kwi-InMotion Hosting, sense generar kwiDashboard yeDashboard> Usebenziso lwe-Akhawunti> Isicelo soTshintsho lweWebhusayithi. Cofa apha ukuze uqalise ukufuduka kwesayithi kwi-InMotion.
Unokucela inkonzo yeGreenGeeks indawo yokufuduka emva kokuthenga. Ukuqalisa ukufuduka, ngena kwi-akhawunti yakho yeGreenGeeks yeAkhawunti> Inkxaso> Isicelo sendawo yokufuduswa kwesiza> Khetha inkonzo> Nika ulwazi olusisiseko lweakhawunti (kumamkeli wakho wakudala) njengepaneli yolawulo ye-URL, ubungqina beakhawunti. Qaphela – Inkonzo yokufuduka kwesiza yeGreenGeeks ayibandakanyi nje ukuhanjiswa kwe-cPanel, koduf nokufuduka kwiqonga LePlesk.
3- Indawo yangaphambili kuma uphumule
Sí, sí, aneu a ekufuneka uyenzile.
Ayikho impazamo yedatha yokuxubusha. Ayikho i-imeyile ye-akhawunti yokufuduka. Kulula nje-pie.
Inketho # 2: Dlulisa iwebhusayithi yakho ngesandla
1- Aleshores umphathi omtsha wewebhu
Kukho iintlobo ngeentlobo zezisombululo zokubamba phaya, nganye inolungelelwaniso lwayo kunye nokunikezelwa. Uya kufuna ukuvavanya kwaye uthelekise okulungele kuwe ngokusekwe kwinani lezinto, ezinjengeendleko, indawo efunekayo, kunye nokumiselwa kweseva, ukubiza ezimbalwa.
Ngokufanelekileyo kufanele ukuba wazise iindwendwe zakho kunye / okanye abathengi ukuba ufudukela kumnxibelelanisi omtsha wewebhu, kunye nolwazi malunga neeyure oency ngalo ukutshintshela. Yinto elungileyo ye-PR yokwenza rhoqo ukency uhlaziyo lwesimo kumaxesha eendaba zentlalo ukugcina abathengi bakho benolwazi. Kwaye kwakhona, cinga ngokubuza abasebenzisi bakho ukuba bangatyeleli iwebhusayithi yakho ngexesha lokufuduka ukunciphisa umthwalo kwinkqubo kunye nokuthintela iintloko ezongezelelweyo zenkonzo yabathengi.
Uya kunikwa inqanaba malunga nokuba iitafile zilungiswa kwaye phezulu kwesikrini sakho kufuneka sithi "Utilitzem el nostre funcionament per SQL".
Okulandelayo, kuya kufuneka ukuba utshintshe irekhodi lewebhusayithi yakho ye-DNS (A, AAAA, CNAME, MX) kwiiseva zomgcini wewebhu omtsha kwirejista yakho.
Irekhodi yakho ye-DNS luhlu "lwemiyalelo" ecacisa apho ukuthumela umsebenzisi; Ukuhambisa abrehodi yakho ye-DNS kumaseva amatsha kuqinisekisa ukuba iindwendwe ziya kufumana indawo yakho njengoko ifunyenwe, kunokuba ufumane impazamo okanye ilahlekise. Le nyathelo elibalulekileyo – qiniseka ukuba ufumana ulwazi olungileyo lwe-DNS kwi-host host Yakho Entsha.
Nantsi imiyalelo yesinyathelo-nge-nyathelo ekutshintsheni iwebhusayithi yakho yeDNS kwi Godaddy, Igama eliphantsi, yaye Domain.com.
Funda kwakhona –
Kwi-allotjament web kunye negama lesizinda
Lenza njani igama le-domain kunye nomsebenzi wokubamba
Amfitrió de i-web d’Indlela yokukhetha
Iinkonzo ezingabonakaliyo zokubamba i-web ukusingatha
Ukuphathwa kweWindowsPremeu l’allotjament a tenir en compte
Indlela yokudala iwebhusayithi ukususela ekuqaleni
Indlela yokuqala iblogi ngaphantsi kweyure
Ukufaka nokuseka aquíifiketi se-SSL